Garoomada Bilood 9 2 todobaad ka hor #1491
Waqtiyada qaarkood markaan la xiriiro munaaradda ilaaliyaha dhulka wuxuu iraahdaa garoonka diyaaradaha hada IFR galaangalidu waa ay diidday waxa ay tani ka dhigan tahay.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: арыга
Garoomada Bilood 9 2 todobaad ka hor #1492
Waxay micnaheedu tahay inaan laguu oggolayn inaad degto VFR. (Xeerarka Duulimaadka Muuqaalka) Waxaan ogaaday inay guud ahaan ku dhacdo xaaladaha cimilada xun (ugu yaraan qaabeynteyda)
Samee diyaarad duulimaad ah, xulo IFR. Waad ku sameyn kartaa duulimaad, kaliya hubso inaad doorato "maya" marka la weydiiyo haddii sim doonayo inuu meeleeyo diyaaradaha garoonka diyaaradaha.
Taas ka dib waa uun raacitaanka tilmaamaha ATC oo waad la degi kartaa rukhsad.
Asal ahaan waxaad leedahay ikhtiyaarada 2 marka aad bilaabayso duullimaad. Diyaarad duulimaad ah looma tixgelinayo inay tahay VFR, nolosha dhabta ah waxay macnaheedu tahay inaad kujirto meel sare (4500ft Belgium iyo inta badan waddamada EU iyo xawaaraha ka hooseeya 140kt IAS) Ka badan waxaa jira faahfaahino dheeraad ah oo dheeraad ah oo ay tahay inaad tixgeliso marka laga hadlayo daruuraha iwm. . FSX runtii dan kama gelin taas.
IFR (Qalabka Duulimaadyada Qalabka) asal ahaan macnaheedu waa inaad u duuli doonto si joogto ah xiriiriyaha ATC. Haddii aadan raacin tilmaamadooda, in ka badan IFR ayaa la tirtiri doonaa. Gudaha FSX / P3D waxay aasaasi u tahay hanuun bilow ilaa dhamaad. Masaafada dheer, waxay ku weydiin doonaan inaad ku sii wadato marinkeeda, laakiin u soo dhowaanshaha halka aad ku socoto waxay ku siin doonaan tilmaamo aad degto. Kaliya ha iloobin inaad u rogto qaybaha ATC markii lagu waydiiyo menu ATC inta lagu jiro duullimaadka ama IFR mar labaad ayaa la tirtiri doonaa.
Ma garanayo haddii ay jiraan faraqyo badan oo u dhexeeya FSX iyo P3D dhanka ATC. My RTX2070 waxay go’aansatay inay dhinto waxyar kadib markii ay kor u kacday P3D, sidaa darteed maanan awoodin inaan arko waxa u dhexeeya farqiga u dhexeeya FSX iyo P3D
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray Nitrical.